UNjomane uphethe ubuciko obungakatholakali kwaboHlanga – Bayede News
UNjomane uphethe ubuciko obungakatholakali kwaboHlanga
UMnumzane uThabo Mhlongo (osesithombeni) waseHowick, maphakathi
UMnumzane uThabo Mhlongo (osesithombeni) waseHowick, maphakathi neKwaZulu-Natal akumenzi azizwe emkhulu kunabanye ukuthi njengamanje nguyena yedwa kwaboHlanga eNingizimu Afrika onolwazi nobuciko bokwazi iminyaka yobudala, ukomelela kanye nenani eliphezulu lempahla yasendlini, akwazi ukuyivuselela aphinde ayidayise ngenani eliphezulu ibe ingeyintsha. Esikhundleni sokuthi lokhu kumkhukhumeze kumenza uNjomane (isithakazelo) abe nesifiso sokuthi babe baningi aboHlanga abangena kulolu hlobo lomsebenzi osaqhoqhobelwe kakhulu ngabamhlophe.
Lokhu kuvele obala engxoxweni uNjomane abe nayo nephephandaba iBAYEDE ehhovisi lakhe elisenkabeni yedolobha uMgungundlovu lapho esebenza khona njengeSikhulu Esiphezulu esengamele inkampani i-Ishnana Holdings enoxhaxha lwezinkampani ezikhosele ngaphansi kwayo nezisebenzisana noHulumeni wakuleli emazingeni ahlukene kuze kuphumele ngaphandle kwemingcele yalo.
Okucace ngesikhathi iphephandaba lixoxisana naye kube wukuthi phezu kwale misebenzi eminingi asengene kuyo okuyiwona msebenzi awubeka phambili yilona wempahla yasendlini ayithola ikade yayisetshenziswa, ayicandule kabusha, agcine eseyidayisela umphakathi ngamanani aphezulu kakhulu.
“Ngeke ukholwe ukuthi lo msebenzi ngingena kuwo nje, ngasizwa wumlungu engangisebenza kuye engadini uMnu uRon Purbrick, kwazise ekhaya sasingabantu abeswele kakhulu. Unyaka kwakungowe-1979. Wangitholela isikole eBloemfontein lapho ngaya khona ukuyokwenza izifundo zokusebenza ngepulangwe lapha ngagxila kakhulu ku-antique repairs, furniture restoration, iFrench polishing neupholstery. Ngaba nenhlanhla yokuthi umlungu owayesifundisa wayenaleli bhizinisi lokuvuselela impahla endala uma kuyizimpelasonto. Ngamphoqa engathandi ukuthi angemukele ngisebenze kuye ngezimpelasonto. Yilapho engafunda khona okuningi okwathi ekuphothuleni kwami izifundo emva kweminyaka emine ngase ngifunde amasu okuba yi-antique dealer, okwakusho ukuthi sengiyakwazi ukuvuselela ngiphinde ngidayise impahla eyilolu hlobo. Ngafunda nokulungisa upiyano,” kubeka uNjomane.
Intatheli imbuzile ukuthi kambe kusukaphi kugcinephi ukuthi impahla ibizwe ngokuthi iyi-antique waphendula wathi: “Akuyona yonke impahla ongayinikeza leli gama. Okuyenza inikezwe lesi sicoco ubudala bayo ngokweminyaka, wukuthi ngesikhathi yakhiwa noma ibunjwa kwasetshenziswa isandla somuntu hhayi umshini, nokuthi ukuze yomelele ikwazi ukumelana nezimo zezulu ezinhlobonhlobo yashiswa elangabini lomlilo. Akubi-ke yimpahla yokhuni kuphela enikezwa leli gama, ngisho naleyo misebenzi yobuciko eyakhiwe ngensimbi kokunye ngobumba, ngisho namabhilidi imbala kuyanikezwa leli gama. Ngokwanda kweminyaka lokho okwenziwe kukhona kuya ngokunyuka ngokwenani okungabuye kudayiswe ngalo, kusukela ezithombeni eziyimidwebo, okubunjiwe, izingilazi, impahla yasendlini nokunye kwenyukelwa yinani ngenxa yobude beminyaka osekuyihlalile. Le minyaka ingasukela kwengamakhulu amahlanu impahla yaqala ukuba khona kwehle njalo kuze kufike eminyakeni engamashumi amahlanu.”
Ebuzwa ngokuqala kwakhe ibhizinisi uthi nakho lokhu kwaqhamuka njengento eyingxaphephe. “Ngathi ngivakashele umfowethu owayesehlala eNtshanga emva kokuhlakazeka komndeni wakithi siphucwa ipulazi ngabona izimpahla zasendlini zilahlwe budedengu ngaphandle komuzi. Ngenxa yokuthi ngase ngikufundele ukubona ipulangwe elingena ngaphansi komkhakha wezimpahla eziyinguganaboya. Wangipha leyo mpahla ngaphandle kokunanaza ngoba ngokungazi kwakhe leyo mpahla kuye yayingasenamsebenzi. Kwaba wukuqala kwami ibhizinisi endaweni yaseThousand Hills.”
Ngokusho kukaNjomane, ubuhle bempahla eyinguganaboya busekuthini umuntu uthenga kanye bese leyo mpahla umuntu alokhu eyivuselela. “Yilapho – ke la mina nefemu yami elaphaya eduze kweMidmar Dam ebizwa ngeThabo’s Antique. Siyazamukela izimpahla abantu abafuna ukuthi zicandulwe kabusha kanti siyaphuma futhi siyoziqoqa lapho sinokuzithola khona sizilungise maqede sizikhangise abantu bazithenge,” kusho uNjomane oqhube wathi njengamanje ukwazi ukudayisa impahla ezingaphezu kwenkulungwane ngenyanga nokumngenisela imali emenelisayo kakhulu. Uphawule nokuthi ngendlela leli bhizinisi lakhe eselikhule ngayo usekwazi ukuyokhangisa impahla yakhe emibukisweni emikhulu ngaphakathi nangaphandle kwesifundazwe edonsa abantu bangaphandle kwezwe.
Ukuncome kakhulu ukuba kulo mkhakha wobuciko ngenxa yokuthi iyimpahla engalahlekelwa yinani. Uma impahla ingadayiseki uyakwazi ukufuna abanye abasemkhakheni ofanayo uzwe ukuthi bangayithenga ngamalini kuwena noma ngabe lokho kusho ukubuyelwa yimali owawuyithenge ngayo. UNjomane uphinde wakuncoma ukungabi nalwazi ngalolu lwempahla yobuciko kwaboHlanga. “Noma kungeyona into enhle ukuthi abantu bakithi abakabi nalwazi ngezimpahla ezingamaantique kodwa kuyasiza ukuthi lungabi khona uvalo lokuntshontshelwa impahla. Abantu abaze babe yinkinga kulokhu ngabamhlophe ngoba yibona benolwazi olungcono ngenani eliyilo lezimpahla ezingena ngaphansi kwalo mkhakha. Yibona-ke abelungu abangaze babe yingozi ngokweba. Ngalena kwalokho lona ngumsebenzi wobuciko, odinga uthando nesineke,” kubeka uNjomane.
Ukukhombisa ukujula kwakhe ngolwazi lwezimpahla eziyinguganaboya nenani eliphezulu ezikwazi ukulizuzela umninizo usikhombise impahla ebukeka ingasho lutho njengamapuleti, amasoso, amathisiphuni nemidwebo ayigcine ngenhloso yokuthi aphinde ayidayise ngenani eliphezulu. Kunesithombe esesineminyaka saba khona somdwebi uCharl Van Niekerk. Ngalokhu uthe: “Ngikunikeza inselelo yokuthi uyophenya ngalo mdwebi ukuze uzitholele ukuthi imidwebo yakhe isingathengwa ngamalini uma idayiswa esikhathini sanamuhla. Ngaphezu kwezithombe kunezitembu nokunye okufuze lokho okuthi uma ungashayela abanikazi bazo ucingo ubatshele ukuthi usakugcinile bakuthenge kuwe ngenani eliphezulu kakhulu.”
Mayelana nekusasa lendawo yakhe yokucandula impahla ukhale ngokuthi ngenxa yokuthi iminyaka yakhe isithanda ukuhamba kakhulu unesifiso sokuyidlulisela ezinganeni zakhe asezifundisile ngalo mkhakha wobuciko. “Konke esengikuzuze empilweni okubalwa kukho namanye amabhizinisi angaphansi kwe-ISHNANA HOLDINGS azalwe wuthando lokusebenzisa izandla ngilungisa ngiphinde ngidayise impahla yasendlini nenginesiqiniseko sokuthi kuseyimi ngedwa kwaboHlanga ongene ngokuphelele kulo munxa wobuciko kuleli lizwe. Kuyisifiso sami ukushiya umsebenzi engifake amandla nekhono lami lonke kuwo ezandleni eziphephile. Abekho-ke engibabona bengakwenza kangcono lokhu ngaphandle kwalabo abazalwa yimi,” kuphetha uNjomane noseke wazuza indondo ebizwa ngeNational Monument Award ngenxa yobuciko bokuvuselela amabhilidi amadala kaHulumeni.